China AUMARK TX mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Dibana nesixeko, iidolophu kunye neemfuno ezimfutshane zedolophu.
Ikhabhathi Umqolo omnye / onesiqingatha
Isiseko sevili 2800-4700
Ukunciphisa Ubunzima 2035-4830
I-LANDT EPHAKAMILEYO EZIZIBEKELELE KWINKQUBELA YOBUGCISA YOKUQHUBA UKUQHUBA UKUQHUBA UKUPHUHLISWA KWESITSHAYINA LDT Ukudibana nesixeko, iidolophu ezisemaphandleni kunye neemfuno zokuhamba phakathi kwedolophu, Uyilo lweqela labasebenzisi abaneemfuno zoqoqosho eziphezulu.
Injini yokusebenza okuphezulu inokuvelisa amandla anesisa, kwaye i-gearbox yeZF itshintsha ngokukhululekileyo, amandla e-kinetic aqhuma kwangoko.
Ifoto yeGreen Power
Torque enkulu: 202Nm / r / min
UTHANDO I-Powerax torque: 202Nm / r
Torque enkulu: 445Nm / r / min
Isakhelo seTraki esomeleleyo
Uphahla oluqinileyo kunye nesihlalo se-Ergonomic
Uvavanyo lokucinezelwa kophahla luqinisekisile ukuba uphahla luyakwazi ukumelana nemikhosi ebalulekileyo. Ukhuseleko lomqhubi kunye nokuthuthuzela zikhona kwigumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala efanelekileyo kunye neebhanti zokhuseleko ezikumgangatho ophezulu.
Izixhobo ezikhethiweyo ze-ABS zandisa ukhuseleko.
Isakhelo setraki siqulathe isakhelo esigcweleyo esinezibhanti eziqinisiweyo.
Ngasemva kweNtwasahlobo: Ukuya kutsho kwimithombo eli-17 yamagqabi ngasemva, elona nani likhulu phakathi kweemveliso ezifanayo, owona mthwalo ulungileyo
I-Chassis isebenza ngamandla amakhulu esinyithi, amacandelo amabini e-shaft shaft kunye noyilo lwentwasahlobo oluncinci, ethwele amaqhuma amaninzi kodwa amancinci. Imingxunya esemgangathweni, iphiko eliphezulu ngaphandle koyilo lwe-rivet, ukuguqulwa ngokulula.
I-Isuzu Technology Ngasemva kwe-asi: Ubunzima bokukhanya, ukuqina okuhle kunye namandla, ukuthwala umthwalo omkhulu, ukubamba iziqhoboshi